Haal duree | Qafiiraa
Itti Fayyadama Walii Galtee Yeroo
Waa'ee ofii keessanii ibsuun hedduu barbaachisaa dha.Nutis waa'ee ofii keessanii ilaalchisee maalifi haala akkamin odeeffannoo akka walitti qabnu ,itti fayyadamnuu fi tamsaasnu imaammata hubachuuf dandeessan bocinee hojiirra oolchinee jirra .Imaammanii kunniin armaan gaditti tarreeffamanii jiru.
Odeeffannoowwan akkaataa kaayyoo isaanitiin ramaddii ramaddiidhaan gulaalamu.
Odeeffannoowwan nama dhuunfaa kaayyoo eerame jidduu galeessa taasifachuun walitti qabuun karaa galma barbaachisu milkeessuu dandeesisuun itti fayyadamana.Kunis kan ta'u fedhii nama dhuunfaa odeeffannoo nuuf laatee fi imaammata keenya irratti hundaa'
Odeeffannoo nama dhuunfaa kan harka tursiifnu yoo kaayyoo keenya galmaan ga'uuf nu fayyade qofaa dha.
Odeeffannoo nama dhuunfaa ilaallatu kan walitti qabnu karaa namtichi beekuun seeraa fi immaammata keenyarratti hundaa'uun karaa sirrii fi haqa qabeessa ta'eeni.
Odeeffannoon nama dhuunfaa irraa walitti qabamu kaayyoo keenyaan kan walsimu.siirrii kan ta'e,guuttuu fi wayitawaa ta'uu qaba.
Odeeffannoon nama dhuunfaa namoota yookaan qaama seeraan mirga hin qabneen akka hin hatamne, hin fudhatamne,kooppii hin taasifamnee ,hin fooyyeeffamnee fi hin raabsamne eeggannaa barbaachisaa ni taasifna.
Haala itti fayyadama odeeffannoo nama dhuunfaa ilaalchisee immaammata bocinee hojiirra oolchine ilaalchisee odeeffannoo gahaa ta'an qopheessinee maammiltootaaf dhiheessinee jirraWe
Hojii bizineesii keenyas kan hojjannu karaa nageenyummaa odeeffannoo nama dhuunfaa eegsisuu dandeesisuu fi haqa qabeessa ta'een immaammata baafne hojiirra oolchuni.
1. Walii Galtee Yeroo
Toora kanatti fayyadamuuf jalqaba itti fayyadama waliigaltee yeroo , seera fi qajeelfama toorichaa eeguuf walii galuu qabda.Himannaa seeraan dhufuufis itti gaafatamummaa fudhachuu qabda.yoo kana hin gotu ta’e itti fayyadamuurra dhorkamuu dandeessa.meeshaleen toora kana keessatti haammataman mirga abbaa waa uumee fi mallattoo daldalaan eegamadha.Hayyama itti fayyadamaa
Koppii meeshalee tokko[odeeffannoo yookiin sooftiweerii]toora qeefirarra jiru dhuunfaaf tajaajila daldalaan alaaf yeroof daawonloodii gochuun ilaaluun ni danda’ama.kun wabii hayyamaati malee mataduree dabarsuuf miti.
Hayyama kana jalatti kan hin danda’amne
2. Meeshalee fooyyesuu yookiin koppii gochuu.
Meeshalee kana dhimma daldalaaf yookiin agarsiisaaf [ tajaajila daldalaafis ta’ee daldalaan alaaf] itti fayyadamuu
Qefira's web site for personal, non-commercial transit:
Sooftiweerii toora qeefirarra jiru jijjiruu.
Mirga abbumaa yookiin yaadannoo meeshicharra jiru haquuUse .
Meeshalee nama biraaf dabarsuu yookiin serverii biraatti ceesisuuAttempt to decompile Qefira's web site.
Yoo wanta dhorkame kana cabsitee argamte hayyamni kee ni dhorkama yookiin qeefiraan yeroo fedhetti haquu ni danda’a.
Erga hayyamni kee dhorkamee yookiin qeefiraan haqamee wanta bifa piriintiingiin yookiin elektirooniiksiin dawoonloodii gootee qabiyyee kee keessaa qabdu haquu qabda..
3.Itti gaafatamummaa hin fudhatu.
Qulqullina yookiin sirrummaa meeshaalee toora kanarra jiraniif qeefiraan itti gaafatamummaa hin fudhatu.mirgoonni abbaa waa uumeegaruu eegamoodha.The materials on Qefira' .
Qeefiraa yookiin dhiyeessitoonni haala kam keessattu meeshalee miidhamaniif ,badaniif kasaaramaniif hojiirratti dhibbaa dhufeef ittigaafatamummaa hin fudhatu.
5. Dabalataan yookiin kan hin sochoone
Meeshaleen qeefirarra ta’an suurawwan garagaraa of keessatti hammatan guutu,sirrii fi yeroo kan eeggate ta’uu fi dhisuu isaaniif qeefiraan itti gafatamuummaa hin fudhatu. Garuu immoo beeksisa tokko malee jijjirama barbaachisu meeshicharatti taasisuu ni danda’a. haaresuuf waada hin galu.
Qeefiraan toorasa waliin liinkota wal qunnaman hin qoratu.qabiyyee isaaniifis itti gaafatamummaa hin fudhatu.liinkota kanatti dabalataan fayyadamuufis deeggarsa qeefiraa hin qabu. Abbumatu itti gaafatamuummaa fudhata.
7. Itti fayyadama walii galteerratti jijjirama taasifamu.
Itti fayyadamuuf walii galtee yeroo waada galte bu’uura godhachuun dirqama ta’a.yoo kana hin taane qeefiraan beeksisa tokko malee yeroo waliigalteerratti jijjirama barbaachisu taasisuu danda’a.
8. Seera Ittiin Hogganamu
Osoo seera keessoo toorichaa walitti hin buhin seera Itoophiyaan hogganama.Any claim relating to Qefira's